६ महिनाकको अवधीमा हामीले ७० प्रतिशत नाफा बढाएका छौं - Aathikbazarnews.com ६ महिनाकको अवधीमा हामीले ७० प्रतिशत नाफा बढाएका छौं -
सुमन शर्मा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा चिनाई राख्नु पर्ने नाम होइन । माछापुच्छ्रे बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदको कार्यभार शर्माले गत जेठ २८ गतेदेखि सम्हाल्दै आएका छन् । बैंकको गत चैत २८ गते बसेको ३७० औं संचालक समितिको बैठकले शर्मालाई सीइओ पदमा नियुक्त गरेको हो । दुई दर्शक बैंकिङ्ग अनुभव बटुलेका शर्माले नेपाल एस.वि.आई. बैंकबाट आफ्नो बैंकि· करिअर सुरु गरेका थिए । त्यसपछि शर्माले एनएमबी बैंक र माछापुच्छ्रे बैंक हुँदै नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा ग्लोबल आइएमई बैंकमा काम गरेको अनुभव बटुलेका छन् । माछापुच्छ्रे बैंकमा यसअघि शर्माले झण्डै ३ वर्ष नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा काम गरेका थिए ।
बैंकिङ्ग क्षेत्रका विभिन्न विषयहरुमा विज्ञता हासिल गरेका शर्मा कर्जा व्यवस्थापन र जोखिम व्यवस्थापनमा उत्कृष्ट मानिन्छन् । माछापुच्छे्र बैंकका सीइओ शर्माले नेदरल्याण्डबाट वित्त तथा लेखा विषयमा MBA गरेका उनीले भौतिकशास्त्र र अर्थशास्त्र विषयमा समेत स्नातकोत्तर गरेका छन् । शर्मा महेन्द्र विद्याभुषण (२०५४), महेन्द्र विद्याभुषण (२०६२), तारापद चौधरी पदक जस्ता थुप्रै पदक बाट सम्मानित भइसकेका बैंकर हुन् । अझ, उनको परिचयको टाकुरा नै यीनै शव्दका पयार्यबाट बनेको छ ।
किनभने उनी एउटा सफल बैंक ‘माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड’का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) हुन् । यीनै माछापुच्छ्रे बैंकका सीइओ शर्मासंग बैंकको वित्तिय अवस्था, वाणिज्य बैंकमा आएको चर्को तरलता अभाव, वाणिज्य बैंकहरुका लगानीका चुनौती र समग्र बैंकि· प्रणालीका बारेमा बरिष्ठ पत्रकार भूपेन्द्र आचार्यले गरेको कुराकानीको केही महत्वपूर्ण अंशः– सम्पादक
० माछापुच्छ्रे बैंकको पछिल्लो वित्तिय अवस्था कस्तो छ ?
बैंकको पछिल्लो वित्तिय अवस्था एकदमै राम्रो छ । पहिला पनि राम्रै थियो । बैंकले व्यक्तिगत डिपोजिट धेरै लिन सकेको हुनाले बैंकको डिपोजिट पनि बढ्न गयो । यसका साथै कर्जा पनि बढेको छ । बैंकको Fee, Transaction banking, interest income बढ्नुको साथै नगन्य खराब कर्जाको कारण बैंकको समग्र वित्तिय अवस्था बलियो हुँदै गएको छ । पहिलो ६ महिनाको प्रगति र अहिले ६ महिनाको प्रगति हेर्दा ठुलो सुधार भएको छ । अहिलेको ६ महिनाको प्रगति विवरणमा ७० प्रतिशत नाफा बृद्धि गरेको छ ।
सेवाशुल्कवाट ६० प्रतिशत आम्दानी भएको छ । व्याजबाट पनि उत्तिकै आम्दानी भएको छ । तर बजारमा भनेजस्तो कर्जाको ब्याजदर बढाएर नाफा बढेको होइन कि विजनेश नै बढेको हुनाले नेपाल राष्ट्र बैंकले भन्नु भएको ब्याजदर अन्त भन्दा कम भए पनि नाफा बढेको हो ।
० पछिल्लो समय माछापुच्छ्रे बैंकको खराब कर्जा उठेको र नाफा बढेको देखिन्छ नि ?
खराब कर्जा घटेर मात्र नाफा बढेको होइन । पछिल्लो वित्तिय विवरण हेर्नुस । खराब कर्जा केही घटेको छ । खराज कर्जा धेरै उठेर नाफा बढेको होइन । एनपीएको लेभल ०.५ भन्दा कम भएको हुनाले बैंकको वित्तिय अवस्था राम्रो छ ।
० तपाईहरु अहिले बजारमा आक्रमकरुपमा आउनु भएको देखिन्छ । यसले व्यापार विस्तार र शाखा सञ्जाल विस्तारमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
बैंकले बजारमा आफ्नो उपस्थिति जनाउनको लागि विभिन्न क्रियाकलापहरु गर्छन् । ब्राण्डिङ्ग देखि लिएर शाखा सञ्जालसम्मका क्रियाकलापहरु । हामीले चाहिँ बैंकको ब्राण्डिङलाई नै धेरै महत्व दिएर काम गरिरहेका छौं । हामीले बिस्तारै बिस्तारै विजनेश ग्रोथ गरेका छौं । त्यस्तो आक्रमक रुपले गएका छैनौं । ६ महिनामा हामीले १२÷१३ अर्ब डिपोजिट, ११ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छौं । हाम्रो बैंकको व्यक्तिगत डिपोजिट राम्रो भएकै कारण बैंकको वित्तिय अवस्था राम्रो छ । हामीले ठुला–ठुला संस्थाहरुको डिपोजिट नलिए पनि व्यक्तिगत र साना साना डिपोजिट धेरै छन् । बैंकमा ६८ प्रतिशत व्यक्तिगतरुपमा डिपोजिट गर्नेहरु छन् ।
३२ प्रतिशत मात्रै संस्थागत डिपोजिट छ । जसले गर्दा बैंक अझ बढी सुरक्षित छ । राष्ट्र बैंकले संस्थागत डिपोजिट ४५ प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत पु¥याउँदा समेत हामीले ३२ प्रतिशत मात्र संस्थागत डिपोजिट लिँदा पनि हामी सुरक्षित छौं । हाम्रो बैंकमा व्यक्तिगत डिपोजिट बढेको अवस्था तर, बजारमा लगानि योग्य Found नभएको अवस्थामा कर्जा दिने मौका पनि हुने हुनाले कर्जा पनि बढ्न गयो । तर, राम्रोसंग कर्जा दिने प्रक्रिया पु¥याएर राम्रो खालको क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरेका छौं । हामी त्यस्तो आक्रमक भएर गएका छैनो । हाम्रो कर्जा प्रवाह हेर्नु भयो भने पनि हामी कर्जा प्रवाहलाई त्यस्तो धेरै प्राथमिकता दिएका छैनों । हाम्रो कर्जा प्रवाह केही प्रतिशत मात्र बढेको अवस्था छ ।
अर्को कुरा शाखा विस्तार भएपछि डिपोजिट पनि बढ्छ । जसले गर्दा कर्जाको मागलाई पुरा पनि गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा बैंकको प्रगति राम्रो भएको हो ।
अर्को पक्ष भनेको मैले बैंकका धेरै जसो शाखाहरुमा गई त्यहाँका कर्मचारीहरुसँग छलफल गरेको छु । पछिल्लो वर्षहरुमा भएका कमीकमजोरीहरुलाई सुधार्ने प्रयास गरेका छौं । कर्मचारीहरुको क्षमता बृद्धि ध्यान दिई तालिमहरुको व्यवस्था मिलाएका छौं । जसले गर्दा बैंकका सबैजना जागरुप, उत्साहित भएका छन् । अझ आफ्नो शाखाले प्रगति गर्दा कर्मचारीहरु अझ बढी उत्साहित भएका छन् । जसले गर्दा बैंकको अवस्था राम्रो भएको हो ।
० बेला बखत सीइओ परिवर्तन देखि कर्जा दिने र ब्याज बढाउने कुराहरुले चर्चामा माछापुच्छ्रे बैंक आईरहेको छ नि ?
सीइओ परिवर्तनको कुरा भन्नुहुन्छ भने अघिल्लो सीइओले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्नु भएन । तर, धेरै सीइओ परिवर्तन भएको संस्था चाहीँ होइन । हाम्रो बैंकका यस अघिको सीइओको कार्यकाल मात्र पुरा नभएको हो । व्याजदर चाहिँ सिधै बेसरेटसँग सम्बन्ध भएको कारण ब्याजदरको रेट कायम हुने हो ।
यो भन्दा अघिल्लो वर्षको कुरा गर्नुहुन्छ भने म भन्न सक्दिन । दुईवटा प्रमोटरको कुरा गर्नुभयो । तर दुईवटा प्रमोटर ग्रुप भन्दा पनि बोर्डमा थुप्रै किसिमको कुरा हुन्छ । हाम्रो बोर्ड सदस्यहरुले एकदमै सहयोग गर्नुहुन्छ । बोर्डबाट एकदमै राम्रो सल्लाह तथा सुझाव पाइरहेका छौं । बोर्डमा म सीइओ भइसकेपछि भन्नुहुन्छ भने मैले एकदमै राम्रो वातावरण पाएको छु । एकदमै सौहार्दपुर्ण वातावरण छ । बोर्डमा त्यस्तो नराम्रो केही छैन ।
० तपाई एनएमबी बैंकबाट माछापुच्छ्रे बैंक आउनु भयो फेरि ग्लोबल आईएमई बैंक जानुभयो र फेरि सीइओ भएर माछापुच्छ्रे बैंकमै फर्कनु भयो अब माछापुच्छ्रे बैंक हाँक्ने तपाईको महत्वपूर्ण योजना चाहिँ के के छन् ?
सीइओले एउटा टिमलाई गाइड मात्र गर्ने हो । सिकाउने हो । आफ्नो आईडिया, भिजन दिने हो । एउटा काम गर्न सक्ने वातावण तयार गरिदिने हो । बैंकको टिमलाई सकारात्मक भिजन, योजना दिने हो । टिमलाई बलियो बनाउने । टिमलाई सकारात्मक सोचको बनाउने । जसले गर्दा बैंकका कर्मचारीहरुले आफ्नो क्षमता अनुसार खुशीका साथ धेरै भन्दा धेरै दिन सकोस । यही वातावरण सृजना गर्ने सीइओको काम हो ।
अर्को भन्नुहुन्छ भने बैंकमा चुस्त मनिटरिङ्ग र फोलोअफको सिस्टम छ भने बैंकको हरेक indicator राम्रो हुँदै जान्छ । हामीले सो mechanism set गरेका छौं र सो मा हामी अझ अग्रसर छौं । र त्यो चिजमा फलो ग¥यो भने बैंक राम्रो हुन्छ । बैंक व्यक्तिबाट होइन सिस्टमबाट चल्ने व्यवसाय हो र लिडरले राम्रो वातावरण र गाइडेन्स दिने हो । सकेनौ भन्न मिलेन ।
० प्रसङ्ग बदलौं नेपाल राष्ट्र बैंकले तपाईहरुलाई विदेशबाट कर्जा ल्याउने देखि शेयर कारोबार गर्न समेत छुट दिएको छ । तर, प्रगति शुन्य छ नि ?
डलरमा लोन लिँदा खेरि पहिला त्यसलाई कहाँ प्रयोग गर्ने त्यसको व्यवस्था गर्नु प¥यो । राष्ट्र बैंकले थप उत्पादनशिल क्षेत्रमा मात्रै डलर कर्जा लिनको लागि निर्देशन दिएको छ । डलरको कर्जा बैंकले पहिला कर्जा produtive sector मा थप चहिएको छ भन्ने कुरा निश्चित भएपछि मात्र डलरमा लोन ल्याउने हो । अब बैंकसंग लगानी योग्य found नभएपछि ७८÷७९ को सीसीडी र १÷२ वटा संस्थागत डिपोजिटहरु रिनु गरेन भने त्यो बेलामा कर्जा प्रवाह गर्छु भनेर भन्ने तर डलरमा कर्जा लिन सकेन भने बैंक प्रति अविस्वास हुन्छ ।
मैले ग्राहकहरुलाई कर्जा दिन्छु भन्दै अफर लेटर दिने र भोली गएर डलर लोन ल्याउन सकिन भने त्यतिखेर हामी उत्पादक क्षेत्रमा गएको हामी prudenty काम गर्न चाहान्छौं । पुरानो उत्पादक क्षेत्रमा गएको त्यत्रो कर्जाहरु देखाएर डलर लोन ल्याउने कुरा भएन । सो कर्जा लिन हामीसँग पाइप लाइनमा विजनेश हुनप¥यो । फेरि तपाईले सोच्नु होला कि हाम्रो बैंकको प्रोडक्टीप क्षेत्रमा बर्जा लगनी छैन भनेर । त्यो पनि होइन ।
अहिलेको परिपेक्षमा बैंकहरुले २५ प्रतिशत उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने नियम छ । हामीहरुले ३२ प्रतिशत उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गरेका छौं । यसरी हेर्दा हामीहरुले ७ प्रतिशत बढी लगानी गरेका छौं । हाम्रो बैंकको उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि बढी महत्व दिएका छौं । त्यसमा हामी अझ बढी लाग्ने प्रयासमा छौं । अर्को कुरा सहायक कम्पनी खोलेर शेयरको कारोबार गर्ने कुरामा हामी प्रोसेसमा छौं । त्यो एकैचोटी हुने कुरा होइन । अरु बैंकहरु पनि प्रोसेसमा नै छन् र यो विस्तारै हुँदै जाने काम हो ।
० डलरमा लोन ल्याउन त देशकको रेटिङ पनि चाहिएला नि होइन ?
त्यो त उनीहरुले हेरिहाल्छ नि ! त्यही अनुसार नै रिक्स मेन्टेन गर्छ र व्याजदर पनि निर्धारण गर्छ । त्यही अनुसारको हिसाब गर्दा अहिलेको समयमा लगभग १० प्रतिशत सम्म आउँछ । १० प्रतिशत भनेको सस्तो पनि होइन । १० प्रतिशतमा लोन ल्याएर त्यसका पनि सिमित क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
० फेरि २८ वाणिज्य बैंकहरुमा लगानी योग्य रकम नभएको (चर्को तरलता अभाव) आएको बजारमा चर्चा छ नि कारण चाहिँ के हो ?
यो अवस्था कहिले जाँदैन । जबसम्म संस्थागत डिजोजिटहरु जस्तै नेपाली सेना, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल प्रहरी, नेपाल टेलिकम लगायत बीमा कम्पनीहरु गरी नेपालमा करिब करिब जम्मा जम्मी २५ देखि ३० वटा संस्थाहरु होलान् । यीनीहरुकै रकमबाट हामी जुन चाहि बैंकको ४०–५० प्रतिशत डिपोजिट छ । त्यसबाट हामी काम गरिरहेका छौं । राष्ट्र बैंकले पनि बैंकहरुको संस्थागत डिपोजिट ४५ प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत पु¥याई दिएको अवस्था छ । यसको मतलब के हो भने बजारमा जतिपनि डिपोजिट छन् ।
त्यसको आधा भाग केही बैंकहरुमा संस्थागत डिपोजिट छन् भन्ने कुरा बताउँछ । त्यसले गर्दा ती २५÷३० संस्थागत डिपोजिटले नै बजारको ब्याजदर निर्धारण गर्दछन् भने हाम्रो जस्तो ३२ प्रतिशत संस्थागत डिपोजिट हुने बैंकहरुमा त उनीहरुको प्रभाव परेको हुन्छ । ५० प्रतिशत नै संस्थागत डिपोजिट भएका बैंकहरुमा कस्तो असर पर्ला । जब सम्म यो किसिमको मेकानिजम रहिरहन्छ । तबसम्म यो समस्या सधैं रहन्छ ।
० डिपोजिट व्याजदरमा सहमती गर्ने २८ वाणिज्य बैंकले कर्जाको व्याजदरमा सहमती गर्न के कुराले रोक्यो ?
त्यसरी बुझ्न भएन । यदि कुनै बैंकले १३ प्रतिशतमा लिएको पैसा बैंकले त्यसको ७५ प्रतिशत मात्र लगानी गर्छ । बाँकी २५ प्रतिशतमा ४ प्रतिशत कुनै चभतगचल नहुने ऋऋच् मा र २ प्रतिशत जति ल्बगति मा अनि बाँकी रकम लगानी गर्छ । जसमध्ये टे«जरी बिल पनि छ । त्यसमा बैंकलाई धेरै कम प्रतिफल छ । डिपोजिटको अयकत को तुलनामा । यि सबै अयकत कर्जा लगानीमा जोडिन गई कर्जाको ब्याजदर अलि बढी हुने देखिन्छ ।
पहिलेको रकमहरु अहिले ९.२५ त भएका छैनन् नि । जसले गर्दा वेसरेट तुरुन्तै घटोस र बेसरेट घटेपछि कर्जाको ब्याजदर आफै घट्दै जान्छ । त्यसकारण डिपोजिट व्याजदर लगायत अन्य कुराले पनि कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्ने हो ।
० सरकारले स्थानीय तहको पैसा वाणिज्य बैंकहरुमा राखेको सुनिन्छ । यसले बैंकहरुको सीसीडी रेसियो त मेन्टेन गर्न सहज होला नि ?
स्थानीय तहको पैसा सिस्टममा त आयो तर ति सबै पैसा सरकारी ३ वटा वाणिज्य बैंकमा धेरै मात्रामा छ । ती बैंकहरुको सीसीडी रेसियो निकै सहज र बेसरेट पनि कम छ । जसले गर्दा ती बैंकहरुले १० प्रतिशतमा कर्जा दिन सकेका पनि छन् ।
० फेरि प्रसङ्ग बदलौ यति धेरै बैंक÷विकास बैंक दुर्गम गाउँघरमा पुगेका छन् । तर, करिब ५० प्रतिशत जनता पनि बैकि· च्यानल भित्र आएका छैनन् । कारण के हो ?
यो रेसियो बढाउनु पर्छ । हाम्रो बैंकबाट दुरदराजका आम उपभोक्ताका लागि भनेर नै ६० वटा शाखारहित बैकिङ्ग सेवा सञ्चालनमा ल्याएका छौं । त्यसैगरी अरु बैंकहरुले पनि अन्य कार्यक्रमहरु संचालनमा ल्याएका छन् । अहिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले अभिमुखिकरण तालिम, बैंकिङ शिक्षाका तालिमहरु संचालन गरिराखेको अवस्था छ । हाम्रो बैंकबाट त ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ भनेर पनि सुरु गरिसकेका छौं । नेपालमा अहिले २८ वटा वाणिज्य बैंकहरु छन् । उनीहरुलाई बजार चाहिएको छ । अब उनीहरु बजार खोज्दै दुरदराजको कुना कुना पुगेर आफ्नो पहुँच पु¥याउँदै छन् । यदी २८ वटा को सट्टामा ८ वटा मात्र वाणिज्य बैंकहरु भएको भए त्यस्तो हुने थिएन । उनीहरुलाई सानो बजार भए पुग्थ्यो ।
० अझै पैसा सहकारी र भकारीमा नै छ भनिन्छ । यसलाई बैकि· च्यानलमा ल्याउन के गर्नु पर्ला ?
हाल बैंकमा अलि ठुलो नगद रकम जम्मा गर्दा रकमको स्रोत खुलाउन पर्ने । तर, अब सबैले बुझ्न जरुरी छ कि, बैंकहरुमा सानो तिनो कारोबारको लागि बैंकले स्रोतको बारे सोध्दा तर्सिनु पर्दैन । मानिसहरुले घरजग्गाको कारोबार गर्दा कारोबार रकम र कागजमा देखाउने रकम अलग अलग भएका कारण आम मानिसहरुमा बैंक प्रति दुविदा पैदा भएको हो । यसले गर्दा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा मात्र नभई सबै ठाउँमा कारोबार भएको रकम जस्ताको तस्तै राख्ने हो भने यता सरकारलाई राजश्व पनि बढ्ने, जुन देशको विकासको लागि महत्वपूर्ण र व्यक्तिलाई पैसाको स्रोत खुलाउन पनि गाह्रो हुदैन ।
० स्थिर दुई तिहाईको सरकार आएको छ । तर, पनि राज्यका विकास निर्माणका काम युद्ध गतिमा भएको देखिन्छ । साँच्चै भन्दा राज्यको बजेट समयमै खर्च नहुनुले बैकि· क्षेत्र अप्ठ्यारोमा सधैं पर्दै आएको मान्न तपाई तयार हुनुहुन्छ ?
विकासका लागि सरकारले छुट्याएको बजेट समयमै कार्यविधि तयार गरी समयमै खर्च गर्नु पर्दछ । हाम्रो देशमा विकासका काम सधैं आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै हुने र विकास बजेटहरु खर्च हुने गरेको छन् । यसलाई परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । ३÷३ महिनामा बैंकमा तरलता अभाव देखियो एउटा विदेशी कम्पनीले अरबौ नाफा बाहिर लैजादा वा सरकारले कर लिँदा तरलताको अभाव हुने गर्दछ । त्यसकारण राज्यले समयमै विकासका कार्यहरुमा शुरु गर्ने र बजेट खर्च गर्नु पर्ने देखिन्छ । यति मात्र नभएर देशको पैसा देशमै राख्ने वातावरण मिलाउनु प¥यो । जसले गर्दा द्यइए ऋणात्मक ८५ अरब (हाल रु ६३ अरब) हुनुभएन । यि दुई कुरा भएमा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरलताको अभाव हुँदैन ।
० बैंकहरुमा पछिल्लो समय शाखा बिस्तार र नाफा कमाउने होडबाजी मैमा छन् । यसले भविष्यमा कस्तो असर गर्ला ?
नाफामा र शाखा बिस्तारमा हामी चाहिँ होडबाजीमा गएका छैनौ । नयाँ बैंकहरुको तुलनामा हामी अगाडी नै छौं । बैंक कस्तो खालको बनाउने, कसरी अगाडी बढाउने, बैंकमा कस्तो प्रकारको सिस्टम बसाउने, भन्ने कुरामा हामी अगाडी छौं । हामी राम्रो र गुणस्तरीय सेवा दिईरहेका छौं ।
० अन्त्यमा कर्मचारी, प्रमोटर, शेयरधनी र लाखौं ग्राहकलाई के भन्नुहुन्छ ?
हाम्रो बैंकमा राम्रो सिस्टम बसेका छ । बैंक व्यवसाय भनेको लामो समयको व्यवसाय हो र बैंक लामो समय सम्म राम्रौ भएर जान्छ । सबै आम ग्राहकहरु ढुक्क भएर माछापुच्छ्रे बैंकसँग कारोबार गर्दा हुन्छ । राम्रो बैंक हुनलाई नाफा मात्र कमाए भन्न मिल्दैन । हामीसँग दक्ष, क्षमतावान र युवा कर्मचारीहरु छन् । हाम्रो बैंकका सबै सूचकहरु राम्रो र सबल छन् । र हामीले सोच विचार गरेर उचित र राम्रा ठाउँमा मात्रै लगानी गरेका छौं । र लाखौं लाख ग्राहकहरुको माया र विश्वास पाउँदै यहाँसम्म आएका छौं । हामीसँग निर्धक्क भएर ढुक्कसंग कारोबार गर्नमा सबैसंग विनम्र अनुरोध गर्दछौं । आर्थिक बजार मासिक
नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारीको तलब सुविधा ४६ लाख ९६ हजार
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २० अर्ब निक्षेप उठाउँदै राष्ट्र बैंक
माछापुच्छ्रे बैंकको क्यूआर कोड तथा वी च्याट पे सेवा लुम्बिनीमा शुरू
माछापुच्छ्रे बैंकले ओकिनावा स्कुटर खरीद गर्ने ग्राहकलाई ०% इएमआइमा ऋण उपलब्ध गराउने
अध्यक्षको चुनाव जितेपछि कुमार पन्तले भने : नेपालमा १० अर्ब लगानी भित्र्याउने छु
प्रभु बैंकको टिमुरे शाखा कार्यालय सञ्चालन